नेपाल र सिङ्गापुर भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दै ! यस्तो छ ईतिहास ! - Hamro Nepal Cricket
नेपाल र सिङ्गापुर भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दै ! यस्तो छ ईतिहास !
नेपालले पाच बर्ष पछि सिङ्गापुरको सामना गर्दै !
आइसिसि बिश्व टि-२० एसिया क्षत्रीय छनोट ‘बि’ अन्तर्गत नेपालले अहिले मलेसियामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। गत पाच खेलमा नेपालले सबै पाच खेलमै जित हासील गरिसकेको छ। पाच खेलमा १० अंकका साथ नेपाल शिर्ष स्थानमा छ भने सिङ्गापुर १० अंककै साथ दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै अन्तिम स्थानमा भने चिन रहेको छ।
जारी प्रतियोगितामा सन्दिप लामिछानेको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहदै आएको छ। उनले पाच खेलमा २० विकेट चट्काइसकेका छन। त्यस्तै पारस खड्काको पछिल्लो रेकर्ड तोड्दै टि-२० को उच्च स्कोर बनाउने प्रदिप ऐरिले पनि राम्रो प्रदर्शन दिदै आएका छन। उनले भुटान बिरुद्दको खेलमा ६८ बलको सामना गर्दै छ चौका र दुई छक्काका मद्द्तले ७५ रन जोडेका थिए।
नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा सिङ्गापुरको सामना गर्ने छ। भोलि(शुक्रवार ) दिउँसो १२:१५ बाट सुरुहुने खेलमा नेपालले प्रतियोगिताको अन्तिम खेल खेल्ने छ। नेपाल र सिङ्गापुरले यश अघि दुई भेट गरेका छन र दुबै भेटमा नेपाल हाबी भएको थियो।
यस्तो छ ईतिहास !
२००९ नोभेम्बर २९ :
नेपाल र सिङ्गापुरले एसिसी ट्वेन्टी२० कपमा भिडन्त गरेका थिए। सो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको सिङ्गापुर ८९ रनमा समेटिएको थियो। नेपालका बिनोद दास र सङम रेग्मिले ३-३ विकेट चट्काउदा सिङ्गापुर धराशायी हुन पुगेको थियो ।
९० रनको लक्ष्य नेपालले १४.२ ओभरमा पूरा गरेको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र चौधरीले ४९(४०) रन बनाएका थिए भने नरेश बुडायरले ३२(३९) रन बनाएका थिए। म्यान अफ द म्याच दिपेन्द्र चौधरी घोषित भएका थिए ।
२०१३ मार्च ३१ |
एसिसी ट्वेन्टी २० कप अन्तर्गत नेपालले चार बर्ष पछि सिङ्गापुरको सामना गरेको थियो । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले पूरा २० ओभर ब्याटिङ गर्दै २१० रन बनाएको थियो। नेपालका लागि प्रदिप ऐरिले ३३ बलको सामना गर्दै ३० रन बनाएका थिए भने बिनोद भण्डारीले ३४ बलमा तीन चौका र चार छक्का प्रहार गर्दै ५४ रनको अर्धशतकिय पारी खेलेका थिए ।
त्यस्तै पारस खड्काले २५ बलको सामना गर्दै ४४ रनको पारी खेलेका थिए भने ११ बलको पारिमा चार छक्का र एक चौका प्रहार गर्दौ ग्यानेन्द्र मल्लले ३० रनको आक्रमक पारी खेलेका थिए । फिनिसरका रुपमा आएका भेषावकरले ११ बलमा ३ छक्का प्रहार गर्दै २६ रन बनाएका थिए।
२११ रनको लक्ष्य पाएको सिङ्गापुरले ८९ रनमा आफ्ना सबै विकेट गुमाएको थियो। वसन्त रेग्मिले ३ विकेट चट्काएका थिए भने शक्ति गौचनले दुई विकेट लिएका थिए भने अरु सबै बलरले १-१ विकेट लिएका थिए।
पाच बर्ष पछाडी नेपाल र सिङ्गापुर फेरि आमने सामने हुदैछन । सिङ्गपुर यस प्रतियोगितामा बलियो टोलिको रुपमा देखिदै आएको छ। आशा छ भोलीको खेल रोमान्चक हुने छ।
Related Items:Featured, recent
काठमाडौ बिरुद्दको खेलमा पाच विकेटले पराजित भएको विराटनगर वरियर्स प्ले अफ पुग्न असफल !
Lalitpur Patriots claims six wicket victory against Gladiators !
केभिन ओ ब्राइनको अलराउन्ड प्रदर्शनमा काठमाडौ पोखरा बिरुद्दको खेलमा पाच विकेटले बिजयी !
नेपालले ११ बलमा नै पछ्यायो लक्ष्य | चीन बिरुद्दको खेलमा नेपाल १० विकेटले बिजयी !
पानी बाधक हुदा नेपाल र सिङ्गापुरको खेलमा रुकावट !